kuleylku wuxuu soosaaraa talaabada hanaanka borotokoolka iyo tayada tayada kuleylka iyo makiinadaha baarista kuleylka ee kuleylka ee goobta shaqada iyo sheybaarka - Xuzhou Double Rings Machines Co., Ltd.
Geeddi-socodka Laba-siddo Kuleyliye Wax-soo-saar Weyn
Tallaabo Soo saar Hannaan
Goynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah ee loo soo dhoofiyo waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo cabbirka sida loogu baahan yahay.
Xakamaynta kuleylka Wuxuu qaadaa hanaanka kululeynta qolka kuleylka, xakameynta heerkulka otomaatigga ah iyo aaladda duubista, Mar loo Sameeyay Sealing
Qalabka dhamaadka Wejiga Wejiga Dambe ee Wajiga Tooska ah ee Wareega Wejiga
Xidhmada weelka La qabsiga tikniyoolajiyada kulul ee isweydaarsiga kulul ee la adeegsaday, habka loo adeegsado iyo sanduuqa tikniyoolajiyadda sameynta teknolojiyadda ayaa hoggaanka u haya.
Pipe suxulka Nidaamka foorarsiga 'koronto-la'aanta' ee aan laf-dhabarta lahayn wuxuu si weyn u yareeyaa qaddarka dhuuban khafiifinta.
Duub Qalabka weyn ee Mashiinka Wareega ee CNC ee Mashiinka Duubista ee tooska ah si loo yareeyo misalignment iyo xagal geeska isku haya dhululubo si loo hagaajiyo hufnaanta shaqada iyo tayada.
Alxanka Submerged-arc si toos ah welded, iyo muuqaalka weld waa mid toosan oo qurux badan.
Baadhitaanka aan Sunta lahayn Dhamaan walxaha cadaadiska sida durbaanka kadib alxamida iyo golaga waa inay noqdaan kuwo aan si xun wax u baaraynin X-ray si loo hubiyo tayada weld.
Qodista Goluhu wuxuu ku qulqulayaa dareeraha
Wada Alxanka Muuqaalka weld waa inuu ahaado mid qurux badan.
Kormeerka Haydarooliga Badeecada la dhammeeyay waa in lagu hubiyaa kormeerka hawo-qabadka si loo buuxiyo shuruudaha cadaadiska naqshadeynta.
Dhismaha Boiler Qaanuunka hore wuxuu qaataa qaanso-biyo-qaboojiyaha, taas oo si weyn u kordhisa dheereynta qaansada hore. Isla mar ahaantaana, dhererka qaansoleyda hore ayaa la kiciyey, sidaa darteed qiiqa qiiqa ayaa si buuxda loogu dhaqaajiyaa qaanuunka hore si loo kordhiyo shucaaca qaybta shabagga; gadaasha dambe waa leben, caymiskaaguna waa la hagaajin karaa. Shidaalka gubanaya waa la qabatimikaraan.
Baakadaha rinjiga Muuqaalka qaybaha aqoonta u leh ayaa la rinjiyeeyay; qaybaha baakadaha ka baxsan ee kuleylka waxaa ka dhaamiya saxaafadda biyo mareenka, iyo adkeynta ayaa wanaagsan; rinjiga wuxuu ka sameysan yahay dubista varnish, muuqaalkuna waa dhalaalaya, siman yahay oo xarrago leh.
1 Warbixinta Xisaabinta Xoog ee Qalabka La Isticmaalay ka dib Mashiinka Kormeerka la kormeeray.
2 100% NDT (kormeerka aan burburka laheyn) warbixin ee saxan bir, tubo iyo alxanka;
3 100% warbixinta baarista raajada (seeraha seeraha): si loo hubiyo tayada matoorka oo dhan;
4 Warbixinta tijaabada Haydarooliga: hubi heerka cadaadiska shaqada iyo amniga;
5 Warbixinta kormeerka dhinac saddexaad: Machadka Kormeerka Badbaadada Qalabka Gaarka ah ee Gobolka Jiang Su
6 Soosaaraha Soosaaraha Heerka Fasalka-A. Badeecada Gaaritaanka Heerarka Yurub CE Calaamadaha.
Mashiinka Kormeerka kuleylka ee aqoon isweydaarsiga iyo sheybaarka
Maya. Magaca Moodel Qty
1 Mitirka Falanqaynta Kaarboon & Baaruud HV-4B 1set
2 Foornada Is-Aqoonsiga Xawaaraha Sare HB-2H 1set
3 Miisaanka Korontada JA1003 1set
4 Sawir qaade 723 1set
5 Iskeelka Miisaaniyadda metallography XJB-2A 1set
6 Mashiinnada Tijaabada ah ee Haydarooliga WE-100 1set
8 Mashiinka Tijaabada Hadalka JB-30 1set
9 Mitirka Mashruuca JS 1set
10 X Ray Crack Baaraha XXH3005 1set
13 Ultrasonic Crack Detector CTS-22 2sets